Aarthik Abhiyan:स्वास्थ्य/जीवन शैली
महिलाको नाममा जग्गा पास बढ्यो
काठमाडौं । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेकोे छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को ७ महीना (साउनदेखि माघसम्म)मा अघिल्लो आव २०७३/७४ को सोही अवधिको तुलनामा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । आव २०७३/७४ को साउनदेखि माघसम्म ७५ हजार ५ सय १३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थिय...
खाना खानेबित्तिकै यी काम नगर्नुहोस्
के तपाईं खाना खानेबित्तिकै घुम्नका लागि बाहिर निस्कनुहुन्छ ? खाना खाएपछि बाहिर निस्किहाल्ने बानी अधिकांशको हुन्छ । सामान्य रूपमा सोच्दा यस्तो गर्नु हानिकारक जस्तो लाग्दैन । तर, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भने यो राम्रो होइन । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खानापछि केही समय आराम गर्नुपर्ने हुन्छ । खाना ख...
खड्का एण्ड शेर हाउजिङद्वारा नयाँ परियोजनाको घोषणा
काठमाडौं (अस) । खड्का एण्ड शेर हाउजिङ प्रालिले आफ्नो नयाँ परियोजनाको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको विजेश्वरीमा १८ ओटा हाउजिङ युनिट बनाउन लागिएको जानकारी दिएको छ । राजधानीमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीले उक्त जानकारी दिएको हो । कम्पनीले समराज कन्ष्ट्रक्शन प्रालिक...
सेतो टाइल सफा गर्ने तरीका
सेतो टाइल चाँडै फोहोर हुने गर्छ । सानो दाग वा केही छिटाले पनि सेता टाइल्सको चमक हराउन सक्छ । तर, यस्ता टाइल्स सधैं आकर्षक बनाउन केही उपाय छन् । टाइल्स सफा र चमकदार राख्दा घरको शोभासमेत बढ्छ । निम्न घरेलु सामग्रीको प्रयोग गरी सेता टाइल्सको सफाइ गर्न सकिन्छ : पानी पानीले सबैभन्दा सजिलोसँग टाइल्स...
मधुमेह : नाम एक रोग पाँच
मधुेमह अर्थात् रगतमा अनियन्त्रित चिनीको मात्रा । सामान्यतया मधुमेह दुई प्रकारको हुने बताइए पनि स्वीडेन र फिनल्याण्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले भने यो पाँचओटा फरकफरक रोगको सङ्गालो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थात्, यसमा गरिने उपचार पनि फरक हुने उनीहरूको भनाइ छ । हाल विश्वका हरेक ११ जना वयस्कमध्ये एक ज...
अनुहारको सौन्दर्यका लागि कोरियन ब्यूटी टिप्स
कोरियाली महिला संसारमै सुन्दर मानिन्छन् । उनीहरू आफ्नो सुन्दरतामा एकदमै सचेत हुन्छन् । साथै, सौन्दर्य बचाइराख्न विभिन्न उपाय अपनाउँछन् । यस कारण उनीहरूको अनुहारको छालामा सधैं चमक रहन्छ । तपाईं पनि कोरियन ब्यूटी टिप्स अपनाई आफ्नो अनुहार सुन्दर र चम्किलो बनाउन सक्नुहुन्छ : तातो टावेलबाट मसाज कोर...
लालपुर्जा ‘स्मार्ट’ बनाइँदै
काठमाडौं । सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । पुरानो लालपुर्जाको सट्टा अब लालपुर्जाको स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य थालिएको भूमिसुधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ  । पहिलेका लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको, मसी खुइलिने र जग्गाधनीको तस्वीर...
अब बगैंचामै तरकारी खेती
तपाईंलाई बगैंचामा पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ थाहै होला । तर, खेती गर्नुभएको पनि छ त ? अन्य तरकारी खेती गर्ने विधिभन्दा थोरै फरक भए पनि यो खासै गाह्रो काम भने होइन । यसका लागि तपाईंमा इच्छा शक्ति र केही समय भने हुनुपर्छ । शुरूमा तपाईंले आफ्नो बगैंचाको माटो कत्तिको उर्वर छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । माटो...
जीडीपीमा सिमेण्टको ६% योगदान
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेमा सिमेण्ट महत्त्वपूर्ण उद्योग हो । नेपालमा उत्पादन हुने धेरै वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये सिमेण्टको हाल नेपालको जीडीपीमा ५ दशमलव ६७ प्रतिशत योगदान छ । नेपालमा सञ्चालित धेरै उद्योगमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । सिमेण्...
कामपाको नक्सापाससम्बन्धी जानकारी एसएमएसमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजत लिने सेवाग्राहीलाई प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेलगायत सूचना एसएमएसबाटै पठाउन शुरू गरेको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी इजाजत दिने र निर्णय हुनासाथ प्रणालीले आफै यस्तो सूचना पठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी...